Moa ve handràra ny fampitam-baovao tsy miankina amin’ny alàlan’ny lalàna i Kiobà? Handrara ny fampiantranoana tranonkala vahiny ny didim-panjakana vaovao · Global Voices teny Malagasy
Tsy ara-dalàna ihany koa ny mampiantrano tranonkala "fampahalalam-baovao" ao an-toerana.
Voadika ny 11 Jolay 2019 8:40 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Português, polski, Italiano, Français, English
Navoakan'ny manampahefana Kiobàna tamin'ny 4 Jolay ny didim-panjakana izay mandràra ny olom-pirenena Kiobana tsy hitantana tranonkala hampiantranoana ivelan'ny firenena. Niteraka voka-dratsy teo amin'ny sehatry ny fampahalalam-baovao tsy miankina miroborobo ao Kiobà, izay saika ahitana ny ankamaroan'ny tranonkalan'ny fampahalalam-baovao sy bilaogy rehetra manararaotra ny fisian'ireo tolotra mpampiantrano vahiny sy ny sehatra fibilaogiana ilay lalàna.
Ny lafiny faharoa sady mampiahiahy kokoa momba ity fitsipika ity dia ny fametrahana ny famehezana henjana ireo karazana tranonkala azo ampiantranoina ao Kiobà avy amin'ny fitsipiky fanjakana Kiobana. Raha araka ny andininy faha 27 ao amin'ny torolàlana izay navoakan'ny ETECSA, tsy afaka miantrano ao amin'ny lohamilina Kiobana ireo lahatsoratra izay ahitana “vaovaon'ny media”. Ankoatra izay, mandrara ny votoaty izay “mifanohitra amin'ny andinin-dalàna na ny lalànan'ny governemanta” na ny mety ho fanakorontana ny “filaminam-bahoaka” ny lalàna ho an'ny bilaogera sy ny hafa izay manoratra fanehoan-kevitra mahaleotena.
“Mamela ny fampahalalam-baovao tsy miankina tsy hanan-tsafidy “ara-dalàna” amin'ny fampiantranoana ity lalàna ity,” hoy ny mpanao gazety ao an-toerana sady mpanoratra ato amin'ny Global Voices Elaine Díaz .”Amin'ny fametrahana lamandy, manameloka ny fanapahan-kevitra tsy tokony hisy vokany ara-pitsarana izy ireo.” Díaz no lehiben'ny toniandahatsoratra ao amin'ny Periodismo de Barrio, vondrona fampitam-baovao tsy miankina any Havana.